Vhesi yeVerisign inotaura kuti injraunda yehurumende mu2019 (Q3) yakawana 5.1 muzana yekukura kwegore negore, kuendesa mumari dzinosvika mazana matanhatu emamiriyoni, uye icharamba ichikura.
1 Dominio di dominio Chii chinonzi?
2 Nome dominio Mazano
3 Miglior generatore di nomi di dominio
3.3 3- Stazione Zita
3.6 6- Generatore di nomi commerciali Shandisa
7.2 Impegno di Nzira Yokutengesa Ma Domaine Kushandisa
7.4 1- Vendite recenti del dominio Kushandisa
7.5 2- Strumenti di valutazione del dominio online di Kushandisa
Dominio di dominio Chii chinonzi?
Apo iwe unoda kutanga webhusaiti, iwe unoda kuva nezita renzvimbo. Asi chii chinonzi diamine iri zita rechizinda?
Iwe unoona, kana webhusaiti ikasikwa, inowanzouya nekero yakasiyana inozivikanwa seWerld Name Name Server (DNS) iyo inowanzoita seyiyi:
Nome dominio Mazano
Il tuo nome di dominio è la tua identità. Ndizvo vanhu vanokuwana iwe, mazita avatengi vanopfuura kune vamwe.
Chengetai zviduku uye zviri nyore kuyeuka (nzvimbo yedu "Rivelato segreto segreto di web hosting" muenzaniso wakaipa!)
Usatya kugadzira izwi kana kushandisa izwi rakaumbwa (fungo – FaceBook, YouTube, Google, LinkedIn)
* Ongorora: Iwe haudi parola chiave muzita rako rezita kuti ugoita zvakanaka paGoogle mazuva ano. Asi iyo pfungwa yakanaka yekuisa zita rako rezita rakatenderedza musimboti wepazita rako sezvo ichapa vashanyi vekutanga nguva yekukurumidza zano rekuti webhusaiti yako iri nezvei.
Miglior generatore di nomi di dominio
3- Stazione Zita
6- Generatore di nomi commerciali Shandisa
Shopify ye Nome commerciale Nome Generatore inokubatsira kuti uite mazita ebhizimisi uye chengetedza zita rekuwanikwa. Tanga nekusarudza izwi rinokosha raunoda kuti nzvimbo yako iise, uye iwe uchawana mazana emazano. Kushanyirwa: Generatore di nomi commerciali di Shopify.
Chirongwa chekunyora uye yekuvandudza mari inodhura zvakanyanya kubva pakuwedzera kwayo (inozivikanwa seTLD). Mumuenzaniso uyu ne NameCheap, un dominio .com inodhura $ 10,98 / gore uov inovandudza pamutengo mumwe chete. Kune rumwe rutivi, nzvimbo ye.store inodhura $ 4,99 / gore kunyoresa asi $ 48,88 / gore kuti uvandudze.
Kunyange zvazvo zvakaoma kupfuurira pasi kunyanya kuti zita rezita rinogona kudhura sei, iwe unogona kutarisira kubhadhara chero kupi zvako pakati pe $ 2 kusvika ku $ 20 pagore, zvichienderana nehotera chero ipi zvayokana.
Murairo wakanaka wegumbo ndeyekuti itsvaer estensioni di dominio (.global, .design., .Cheap) inogona kunge yakadhura zvishoma kupfuura yakawanda estensioni di dominio (.com, .net), sezvo ivo vachangobva kuiswa pamusika .
Kune zvakanakira uye zvakaipira kunzira mbiri idzi asi pakupedzisira, zviri kwauri kuti ho unoda qui kubhadhara kune anodhura asi achizivikanwa maadha
Dominio di Nyoresa kana iripo.
Iwe unogona kunyoresa domain kana iripo. Asi, unaita sei chaizvo?
Registratori di dominiPricingWHOIS Privacy
123 Reg £ 11,99 £ 11,99 £ 4,99 / gore
Gandi € 12,54 / gore € 16,50 / gore –
Vai papà $ 12,17 / gore $ 12,17 / gore $ 7,99 / gore
kuyengerera $ 12,99 / gore $ 15,49 / gore Gratuito
Zita Rakaderera $ 10,69 / gore $ 12,88 / gore Gratuito
Soluzioni di rete $ 34,99 / gore $ 32,99 / gore $ 9,99 / gore
Dzimba dzinodhura dzinogona kusvika kusvika kune zviuru zvemadhora asi mushroom mokudaro, mari yekuvandudza inonyatsodanwa ($ 10 – $ 15 pagore).
Cloudflare vaudza mazita avo mazita ehurumende kubhadhara mabasa ane zero mari yekubhadhara uye inopa mitengo yakawanda yeTLD dzakadai se .com, .net, .io ,, ecc. Nhasi, iyo inoshandiswa kune vasati vambotanga Cloudflare uye kuti vanku korkima purogiramu.
Zvinokwanisika qui kutenga zita rezita rega zvakananga kubva kune webhusaiti inovaka kana kukamba makambani?
Vamwe vevakanakisisa vekuvaka webusaiti nhasi, zvakadai Wix o Weebly, ichakupa rusununguko rwemasikirwo emazita egore kana iwe ukanyorera kumapurogiramu evitare egore negore.
Kunyangwe zvingangodaro zvinyorwa zvishoma kana zvichienzanisa nekunyora ruzivo iwe pachako, kubatsirwa kwekutenga zita rekuda mazita kuburikidza newebsite yevashandisi ndeyokuti ko kangatanuza kita yusa yusa.
Impegno di Nzira Yokutengesa Ma Domaine Kushandisa
Ora, wakawana, zita remudunhu, ehi, neye mutengesi, wakasarudza pamari. Iko conundrum inova: Unobhadhara sei mari yakachengeteka uye unova nechokwadi kuti muridzi wacho anotumira umudyari wehutori kwauri?
Iwe unoda kusimbisa pamwe nekambani yekutsvaga kuti umiridzi wezita rezita redu wakatumirwa kwauri. Shandisa NDIANI o WHSR Web Host Spy kuti uone kana muridzi wemuzinda wacho avandudzwa kana kwete.
Paunenge uchitsvaga zita rekugara rine mazita, iro rinowanzowanika pamusangano wemarkmarket, vatengesi vega, uye vendesa – iwe uchacherechedza kuti kukosha kwavo kunogona kumira kupi kubva kune madhora mashomanana kusvomus.
1- Vendite recenti del dominio Kushandisa
DNJournal pubblica un rapporto sul dominio del dominio segnala izvo zvavanogara vachidzokorora uye mairi, vanonyora mazita mazita evitare achangobva kutengeswa kubva kune più servizi di dominio premium. Paunotarisa kuburikidza, tarisa kune mazita echirongwa chemashoko, urefu, uye zvimwe zvakakosheswa kuti uwane pfungwa yekuti zita rekudoma rakakosha sei.
Rapporto sulle vendite di domini rakabudiswa paDN Journal (maggio 2018)
Schermata yaDN Rapporto sulle vendite del dominio Journal.
2- Strumenti di valutazione del dominio online di Kushandisa
Mamwe mashomanana aunogona kutarisa ndeawo Estibot, WebsiteOutlook, uye URL Assessment.
Aya masayiti anoona kukosha kwemasimusi achishandisa SEO-zvine chokuita nezvinhu zvakadai sekutsvaga, parole chiave, ranking Alexa, mwedzi wekutsvaga, nhamba yekutsvaga, uye mari inoshandiswa pane imwechete.
Chinhu chimwe chekucherechedza ndechokuti nzvimbo dzakasiyana dzinogona kukupa maonero akasiyana. Chirongwa chakanaka chaizove kushandisa shanduko dzakasiyana-siyana uye wozvienzanisa nekukupa kuongororwa kuri nani kwezita rezita rezita rezita reimba.
Zvakare, hapana marongerwo emitengo ekutenga zita rezita uye iwe unogona kutarisira kuti vashandurwe kakawanda. Kana iwe uchida pfungwa yakawanda yezita rematunhu mazita, unogona kuenda kune dzimwe nzvimbo dzakadai Afternic o Tenga Mazita kuti uwane manzwiro emari.
Zvingave zviri kuburikidza newebsite vavakiki kana kuti registrar domain domain, kupiwa zita rezita rinofanira kuva chinhu chokhu chokutanga chamunopedza musati maenda kurarama. Kana uchinge watora izvozvo pasi, inguva yekufungisisa achivaka website yako.